May Published inLocal News Written by
Be the first to comment! ရိုဟင်ဂျာ မရှိကြောင်း အထောက်အထားစာတမ်းများ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂနှင့် အနောက်နိုင်ငံများသို့ ပေးပို့မည်
စိုးချစ်ချစ်ပိုင် ၊ (Flower News Journal, 12-19) Read more... 27
Apr Published inLocal News Written by
Be the first to comment! ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ပြန်လည်ရွေးချယ်ရန် သမ္မတရုံးအကြောင်းကြား
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၆ ရပ်ကွက်သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအား ပြန်လည်ရွေးချယ်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ အကြောင်းကြားထားကြောင်းသိရသည်။ ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအား ပြန်လည် ရွေးချယ် ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဧပြီ ၂၂ ရက် ရက်စွဲဖြင့် အကြောင်းကြားထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးကျော်မြင့်က ''ပြန်လည်ရွေး ချယ်ခန့်အပ်တာဝန် ပေးဖို့ ဧပြီ ၂၂ ရက်က တိုင်းအစိုးရ အဖွဲ့ကို ညွှန်ကြားချက်ရောက်ပါတယ်။ ညွှန်ကြားချက်ရတဲ့အချိန်ကစပြီး ပြန် လည်ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ ညွှန်ကြား ထားပါတယ်''ဟု ပြောသည်။
Be the first to comment! သမီးဖြစ်သူကိုဓားထောက် သိန်း ၅ဝ တောင်း၊ အဖေဖြစ်သူကို ကားမောင်း၍ လိုက်ပို့ခိုင်းကာ တရားခံလွတ်မြောက်သွားသည့် ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန် အနုကြမ်းစီးဓားပြတိုက်မှု ကြည့်မြင်တိုင်တွင် ဖြစ်ပွား
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၆
ရန်ကုန်မြို့ကြည့် မြင်တိုင်မြို့နယ် ကရင်အမျိုးသားရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ်တစ်ခုတွင် နံနက်ပိုင်းအချိန်၌ အိမ်ရှင်အရွယ်မရောက်သေးသည့် သမီးဖြစ်သူအားဓားထောက်၍ ငွေကျပ်သိန်း ၅ဝ ကိုတောင်းယူကာ သမီးဖြစ်သူ ကို ဓားစာခံအဖြစ်ခေါ် ဆောင်လျက် ဖခင်ဖြစ်သူအား ကား မောင်းလိုက်ပို့ခိုင်းသည့် ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်ဓားပြတိုက်၊ ပြန်ပေးဆွဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူမှာ လွတ်မြောက်သွားခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဧပြီ ၂၆ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Be the first to comment! ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဧဝရက်တောင်ထွတ်သို့ တက်ရောက်နေသည့် မြန်မာတောင်တက်သမားသုံးဦး အမြင့်ပေ ၂၁ဝဝဝ မြင့်သည့် Camp2အထိ တက်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်
Be the first to comment! ခွင့်ပြုချက်မရသေးဘဲ လှိုင်သာယာတွင် စက်သုံးဆီဆိုင်တည်ဆောက်နေမှု စည်ပင်နှင့်ဒေသခံများကန့်ကွက်
Read more... StartPrev1234...678910Page 1 of 27 Business Info